ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဠာန်းလိုက်သည်။
၁။ ဤဥပဒေကို ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
( ခ ) ရေနံ ဆိုသည်မှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကာဗွန်အရောအနှောဖြစ်သော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း လောင်စာ (Fossil Fuel)များကို ဆိုသည်။ ယင်းစာကားရပ်တွင် ရေနံစိန်း (Crude Oil) ၊ လေဆီ(Condensate) နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့(Natural Gas) စသည်တို့ပါဝင် သည်။
( ဂ ) ရေနံထွက်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာရေနံအားချက်လုပ်ခြင်းမှ ထွက်ရှိလာသည့် ပစ္စည်းတမျိုး မျိုးကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ပျံဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ လေယာဉ်ဆီ၊ရေနံဆီ၊ မီးထိုးဆီ၊ စက်ဆီ၊ ချောဆီ၊ ဖိအားမြင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ (Conpressed Natural Gas-CNG)၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရည် (Liquefied Petroleum Gas-LPG)၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းတမျိုးမျိုးနှင့် ရောစပ်ထားသော ဇီဝလောင်စာဆီများ၊ဖယောင်း၊ကတ္တရာ စသည်တို့နှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းအဖြစ် အခါအားလျော်စွာ ဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော် ငြာစာ ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်သည့် ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
(ဃ) မီးလောင်မှတ် (Flash Point) ဆိုသည်မှာ ရေနံ သို့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းမှ အငွေ့ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ပြင်ပမှတစ်နည်းနည်းဖြင့် မီးကူးစက်သည့်အခါ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ချက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်ကို ဆိုသည်။
( င ) မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ရေနံ (Dangerous Petroleum) ဆိုသည်မှာ မီးလောင်မှတ် ၇၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် သို့မဟုတ် ၂၄.၄၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် ယင်းအောက်နိမ့်သော အပူချိန်တွင် အလွယ်တကူ မီးကူးလောင်နိုင်သည့် ရေနံ သို့မဟုတ် ရေနံထွက် ပစ္စည်းကို ဆိုသည်။
( စ ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများအားပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဖြတ်သန်းသယ်ယူခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ လက်ဝယ်ထားခြင်း၊ ချက်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်။
(ဆ) ပြည်တွင်းတင်သွင်းခြင်း ဆိုသည်မှာ ရေနံ သို့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ကုန်းကြောင်း၊ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်း၊ ပိုက်လိုင်းစသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် တင်သွင်းခြင်းကို ဆိုသည်။
( ဇ ) ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရေနံ သို့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို ပြည်ပသို့ ကုန်းကြောင်း၊ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်း၊ ပိုက်လိုင်းစသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် တင်ပို့ခြင်းကို ဆိုသည်။
( ဈ ) သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း (Transportation) ဆိုသည်မှာ ရေနံ သို့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တစ်နေရာမှ အခြားတစ်နေရာသို့ နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ခြင်းကို ဆိုသည်။
(ည) ဖြတ်သန်းသယ်ယူခြင်း (Transit) ဆိုသည်မှာ ရေနံ သို့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို မြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကိုဖြတ်၍ နည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖြတ်သန်းသယ်ယူခြင်းကို ဆိုသည်။
( ဋ) သိုလှောင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရေနံ သို့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နေရာတစ်ခုခုတွင်ထားသိုခြင်းကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ရေနံ သို့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သော လမ်းကြောင်းဖြင့် သယ်ယူနေစဉ်အတွင်း ခေတ္တထားသိုခြင်းမပါဝင်။
( ဌ) ချက်လုပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရေနံကို ရေနံထွက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရရှိရန် နည်းစဉ်တစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ချက်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရောနှောခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဆိုသည်။
( ဍ ) လက်ဝယ်ထားရှိခြင်း ဆိုသည်မှာ ရေနံ သို့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင် ထားရှိခြင်းကိုဆိုသည်။
( ဎ ) ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း ဆိုသည်မှာ ရေနံ သို့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို အဖိုးစားနားဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းကို ဆိုသည်။
(ဏ) စစ်ဆေးခြင်း ဆိုသည်မှာ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးနှင့် အခြင် အတွယ်ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းကို ဆိုသည်။
(တ) စမ်းသပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ရေနံ နှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို စမ်းသပ်ခြင်းကို ဆိုသည်။
(ထ) စစ်ဆေးရေးအရာရှိ ဆိုသည်မှာ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်း ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သည့် နေရာတစ်ခုခုကို စစ်ဆေးရန်နှင့်ထိုနေရာတွင် တွေ့ရှိသည့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို နမူနာယူပြီး စမ်းသပ်ရေးအရာရှိထံသို့ ပေးပို့ရန် အတွက် ဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ တာဝန်ပေးအပ်ထားသောအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်သည့် ရေနံလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူအရာရှိကို ဆိုသည်။
( ဒ ) စမ်းသပ်ရေးအရာရှိ ဆိုသည်မှာ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကို အရည်အသွေး စမ်းသပ် ရန်အတွက် ဝန်ကြီးဌာနသည် အမန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ တာဝန်ပေးအပ်ထားသော ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းပစ္စည်း၊ အရည်အသွေးစမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။
( ဓ ) ဓာတ်အားသုံးယာဉ်၊ စက်ယန္တရား ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ စက်အားရရှိရန် ရေနံထွက်ပစ္စည်း တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုသည့် ယာဉ်၊ စက်ယန္တရားကို ဆိုသည်။
( န ) လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို ဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ ဤဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မ ၉ နှင့် ပုဒ်မ ၁၀တို့အရ ထုတ်ပေးသည့်လိုင်စင်ကိုဆိုသည်။
( ပ ) ဂါလန် ဆိုသည်မှာ ဗြိတိသျှစနစ်ဖြင့် ထုထည်ကို တိုင်းတာသည့် ယူနစ်ဖြစ်ပြီး တစ်ဂါလန်တွင် ၄.၅၄၆ (လေးဒသမငါးလေးခြောက်) လီတာရှိသည်။
( ဖ ) ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
( ဗ ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ပါး ဤဥပဒေပါ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ရှိအခြားဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုခုကို ဆိုသည်။
( မ ) စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ယ) စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
( ရ ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ကို ဆိုသည်။
(လ) ဝန်ကြီး ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကို ဆိုသည်။
( ဝ ) ကော်မတီ ဆိုသည်မှာ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကို ဆိုသည်။
၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေပြဋာန်းချက်များ၊ သတ်မှတ် ထားသော စံချိန်စံညွှန်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ စနစ်တကျဆောင်ရွက်စေရန်၊
( ခ ) ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊
( ဂ ) ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လွတ်လပ်၍ မျှတသော ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်စေရန်၊
(ဃ) နိုင်ငံတော်၏စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်နှင့်စွမ်းအင်လုံခြုံရေး အာမခံချက်ရှိစေရန်၊
၄။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရေနံနှင့် ရေနံထွက် ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန်အတွက် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်အများဆုံး ၁၅ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။
(က) သက်ဆိုင်သည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအလိုက် တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း တာဝန်များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
( ခ ) တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီများကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်ညှိနှိုင်း၍ ဖွဲ့စည်းစေခြင်း လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်စေခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဂ ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ တွင်လွယ်ကူမြန်ဆန်မှုရှိစေရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(ဃ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဤဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်စေရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ခြင်း၊
( င ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကို သက်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်း၊ အရည်အသွေး၊အခြင်အတွယ်ပြည့်မီ မှန်ကန်မှုရှိစေရေး ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ခြင်း၊
( စ ) တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာအမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို ဖြစ်စေ၊လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသောရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအား လိုအပ်သလို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုရှိစေရေးနှင့် သဘာဝတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိစေရေးအတွက် လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်ခြင်း။
၆။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုအပ်ပါက ကော်မတီကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ တိုးချဲ့သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ ခွင့်ပြုအမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း၊ လိုက်နာရန်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်
၇။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုး နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လိုင်စင်များထုတ်ပေးခြင်း
(ခ) ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းပြုရာတွင် သတ်မှတ်ပေးသည့် နေရာများမှတစ်ပါး အခြားနေရာများမှတင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် တင်ပို့ခြင်းကို တားမြစ်ခြင်း
(ဂ) ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း နှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း
(ဃ) ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရန် သို့မဟုတ် ပြည်ပသို့တင်ပို့ရန် လိုင်စင်များအတွက်လျှောက်ထားရန်ကာလ၊ ပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များ၊ လိုင်စင်လျှောက်ထားပုံနည်းလမ်းများစည်းကြပ်ရမည့်အခများနှင့် အခြားကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆ သည့်စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
၈။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါလုပ်ငန်း များကို ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ချက်လုပ်ခြင်း၊ ဖြတ်သန်းသယ်ယူခြင်း၊ ပိုက်လိုင်းဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် လိုင်စင်များ ထုတ်ပေး ခြင်း၊ လုပ်ငန်းတစ်မျိုးထက် ပိုမိုဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် နှစ်မျိုးတွဲလိုင်စင်ကို ဖြစ်စေ၊ ပေါင်းစပ်လိုင်စင်ကိုဖြစ်စေထုတ်ပေးခြင်း၊
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ လိုင်စင်များအတွက် လျှောက်ထားရန်ကာလ၊ ပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များ၊ လိုင်စင်လျှောက်ထားပုံနည်းလမ်းများ၊ ခွင့်ပြုမည့်အာဏာပိုင်နှင့် စည်းကြပ်ရမည့် အခကြေးငွေများကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
( ဂ ) ချက်လုပ်ခြင်း၊ ဖြတ်သန်းသယ်ယူခြင်း၊ ပိုက်လိုင်းဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့် စည်းကမ်းချက်များကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဃ) ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် တင်ပို့သူ၊ လက်ခံသူ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်သူ၊ သိုလှောင်သူများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို သတ် မှတ်ခြင်း၊
( င ) သယ်ယူပို့ဆောင်မည့် ထုတ်ပိုးထည့်သွင်းသည့် ပစ္စည်းများ၏ စံချိန်စံညွှန်း၊ အရည် အသွေးနှင့် ပိုက်လိုင်းများအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
( စ ) ရေနံရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးတွင် တည်ဆဲဥပဒေများအရ တားမြစ်ကန့်သတ်ချက်တွင် မပါဝင်သည့် အဆိပ်အတောက်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းနှင့်စက်ပစ္စည်းများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သည့် သတ္ထုဓာတ်ပစ္စည်းများ၏ ပါဝင်ရမည့် အချိုးအစားနှင့် ပမာဏကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်း၊
(ဆ) စံချိန်စံညွှန်း၊ အရည်အသွေး၊ အခြင်အတွယ် မှန်ကန်မှုရှိစေရန်အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
( ဇ ) စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများအရ သတ်မှတ်အရည်အသွေးနှင့်မကိုက်ညီသော ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
(စျ) ချက်လုပ်မည့်နေရာ၊ သိုလှောင်မည့်နေရာနှင့်သိုလှောင်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ည) လက်ဝယ်ထားခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း
(ဋ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကို သင့်လျော်သော ထိန်းကွပ်ကြီးကြပ်မှု ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်ခြင်း၊
( ဌ) နိုင်ငံတော်၏ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များနှင့် စွမ်းအင် လုံခြုံရေး အာမခံချက်ရှိစေရေးတို့အတွက် သင့်လျော်သည့် အစီအမံများချမှတ်ခြင်း၊
( ဍ ) သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဖြတ်သန်းသယ်ယူခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း၊ ချက်လုပ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စစ်ဆေးခြင်း။
၉။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို သယ်ဆောင်သည့် မော်တော်ယာဉ်၊ ရေယာဉ်နှင့် တွဲများကို လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊
( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က)ပါ လိုင်စင်များအတွက် လျှောက်ထားရန်ကာလ၊ ပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များ လိုင်စင်လျှောက်ထားပုံ နည်းလမ်းများ၊ ခွင့်ပြုမည့် အာဏာပိုင်နှင့်စည်းကြပ်ရ မည့် အခကြေးငွေများကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
( ဂ ) ရေကြောင်းမှတင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်းဆောင်ရွက်သည့် ရေယာဉ်နှင့် တွဲများအတွက် ဆိပ်ကမ်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ကြီးကြပ် ခြင်း၊
(ဃ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကို ရေကြောင်းမှတင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ယိုဖိတ်မှုနှင့်မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားပါက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ လိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( င ) ပိုက်လိုင်းဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းမှအပ ဖြစ်သည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း။
၁၀။ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်း တစ်မျိုးမျိုးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) သိုလှောင်ကန်နှင့် သိုလှောင်ရုံများအတွက် သိုလှောင်ခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊
( ခ ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို သယ်ဆောင်သည့် မော်တော်ယာဉ်၊ ရေယာဉ် နှင့်တွဲများအတွက် သယ်ယူခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ထုတ်ပေးခြင်း၊
( ဂ ) ပုဒ်မခွဲ(က)ပါလိုင်စင်နှင့် ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ ခွင့်ပြုမိန်းတို့အတွက် လျှောက်ထားရန် ကာလ၊ ပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များ၊ လျှောက်ထားပုံနည်းလမ်းများ၊ ခွင့်ပြုမည့်အာဏာပိုင်နှင့် စည်းကြပ်ရမည့် အခကြေးငွေများကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဃ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများဖြစ်ပွားပါက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီလိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( င ) သိုလှောင်ကန်နှင့်သိုလှောင်ရုံများ၊ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို သယ်ဆောင်သည့် မော်တော်ယာဉ်၊ ရေယာဉ်တွဲများရှိ သိုလှောင်ကန်များ၏ စံချိန်စံညွှန်း အရည်အသွေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းကမ်းချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ခြင်း။
၁၁။ ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးပါရှိသည့် ထုပ်ပိုးထည့်သွင်း ပစ္စည်း အားလုံးတွင် တံဆိပ်နှိပ်ခြင်း၊ ဖောင်းကြွပုံဖော်ခြင်း၊ ဆေးဖြင့်ရေးသားခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းတို့ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့်ဖြစ်စေ အန္တရာယ်သတိပေးချက်ကို ဖော်ပြရမည်။ ထိုသို့ဖော်ပြရန် မဖြစ် နိုင်ပါက ထုပ်ပိုးထည့်သွင်း ပစ္စည်းအနီး၌ ဓာတ်ဆီ၊ အရက်ပျံ သို့မဟုတ် ရေနံ၏ ဘေးအန္တရာယ် ရှိသည့်သဘာဝကို သတိပေးသည့် အလားတူသတိပေးချက်ကို မြင်သာသည့်နေရာတွင် ထင်ရှား သော စာလုံးများဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သင်္ကေတဖြင့်ဖြစ်စေ ရေးသားဖော်ပြရမည်။
၁၂။ ပုဒ်မ ၁၁ ပါပြဌာန်းချက်သည် အောက်ပါထုပ်ပိုးထည့်သွင်း ပစ္စည်းတစ်ခုခုနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ-
(က) နှစ်ဂါလန် ပမာဏအောက် လျော့နည်းသည့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ရေနံကို အဖုံးလုံခြုံ စွာဖြင့် ထည့်သွင်းထားသည့် ဖန်ထည်၊ ကျောက်ထည် သို့မဟုတ် သတ္တုထည်တစ်ခုခု၊
( ခ ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးသုံးသည့် စက်အားသုံးယာဉ်၊ စက်ယန္တရားတွင် တွဲလျက်ပါဝင်သော တိုင်ကီ၊
( ဂ ) မြေအောက်တွင် လုံးဝမြှုပ်ထားသော သိုလှောင်ကန်။
(ဃ) ဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ ဤပုဒ်မနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ် ခွင့်ပြုထားသော ထုတ်ပိုးထည့်သွင်းပစ္စည်း အတန်းအစားတစ်ခုခု။
၁၃။ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုး သယ်ယူပို့ဆောင်သည့် ပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်တွင် အန္တရာယ်အမှတ်အသား သတိပေးချက်ကို ထင်သာမြင်သာရှိသော စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သင်္ကတဖြင့် ဖြစ်စေ ရေးသားဖော်ပြရမည်။
၁၄။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို ဤအခန်းပါပြဌာန်းချက်တစ်ခုခုမှ ခြွင်းချက် ပေးနိုင်သည်။
၁၅။ ဘေးအန္တရာယ်မရှိသော ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်း၌ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် သိုလှောင်ခြင်းပြုလုပ်လိုသူသည် စုစုပေါင်း ဂါလန် ၅၀၀ ထက်ပိုမိုလျှင် လိုင်စင်ရယူ ရမည်။ သို့ရာတွင် ဂါလန် ၅၀၀ နှင့်အောက်ရှိသော ပမာဏကို ထားသိုရာတွင် ဂါလန် ၂၀၀ ထက် မကျော်လွန်သည့် ထုပ်ပိုးထည့်သွင်းပစ္စည်းကို အသုံးပြုရမည်။
၁၆။ မည်သူမဆို ရောင်းချရန်မရည်ရွယ်သည့် ခြောက်ဂါလန် ထက်မပိုသော ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို လိုင်စင်ရယူရန်မလိုဘဲ သိုလှောင်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်း ခြင်း သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၁၇။ ပုဒ်မ ၁၆ အရ ဘေးအန္တရာယ် ရှိသော ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို ထားသိုလိုပါက အဖုံးလုံခြုံသည့် ဖန်ထည်၊ ကျောက်ထည် သို့မဟုတ် သတ္တုထုပ်ပိုး ထည့်သွင်းပစ္စည်းတွင် ထည့်သွင်း ထားသိုရမည်။ ဖန်ထည် သို့မဟုတ် ကျောက်ထည် ထုပ်ပိုးထည့်သွင်း ပစ္စည်းတွင် ထားသိုလျှင် သုညဒသမနှစ်ငါးဂါလန် ပမာဏထက်မပိုစေရ။ သတ္တုထုပ်ပိုးထည့်သွင်းပစ္စည်းတွင် ထားသိုလျှင် ငါးဂါလန်ပမာဏထက် မပိုစေရ။
၁၈။ စက်အာသုံးယာဉ် စက်ယန္တရားတို့၏ ယာဉ်မောင်း၊ ရေယာဉ်မှူး၊ ပိုင်ရှင်တို့သည် ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုသော စက်အားသုံးယာဉ်နှင်စက်ယန္တရားများတွင် တပ်ဆင် ထားသည့် မူလသိုလှောင်ကန်တွင် ပါရှိသည့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းအပြင် ယင်းစက်အားသုံး ယာဉ်၊ စက်ယန္တရားများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် သိုလှောင်ထားသည့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ဂါလန် ၂၀ ပမာဏထက်မပိုသည့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းတို့အတွက် လိုင်စင် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်မလို။
၁၉။ ဝန်ကြီးဌာနသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ မိမိဝန်ကြီးဌာန၏ရေနံလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ အရာရှိတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ ဝန်ကြီးဌာနမှ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်း အရည်အသွေး စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားသော အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်း သို့တင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းပြုလုပ်မည့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ နမူနာယူပြီး စမ်းသပ်ရေးအရာရှိထံ ပေးပို့၍ စမ်းသပ်စစ်​ဆေးစေရမည်။
၂၀။ ဝန်ကြီးဌာနသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ မိမိဝန်ကြီးဌာန၏ ရေနံလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူအရာရှိတစ်ဦးက စစ်ဆေးရေးအရာရှိအဖြစ် ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့အား ရေနံနှင့်ရေနံ ထွက်ပစ္စည်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည်နေရာတစ်ခုခုကို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရန်နှင့် ထိုနေရာ တွင် တွေ့ရှိသည့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို နမူနာယူပြီး စမ်းသပ်ရေးအရာရှိထံသို့ ပေးပို့၍ စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
(က) စမ်းသပ်ရန်အတွက် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်း နမူနာယူခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ခြင်း၊
( ခ ) စမ်းသပ်ရန်နမူနာရယူခြင်းအတွက် ကျသင့်စရိတ်နှင့်ငွေပေးချေရမည့်နည်းလမ်းကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
( ဂ ) ဤပုဒ်မအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကိုသတ်မှတ်ခြင်း။
၂၂။ စမ်းသပ်သည့်အရာရှိ သို့မဟုတ် စမ်းသပ်ခြင်းလိုင်စင်ရ အဖွဲ့အစည်းသည် ရေနံနှင့်ရေနံထွက် ပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါတို့ကိုဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများ၏ မီးလောင်မှတ်နှင့် အခြားအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုတို့ကို စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ သတ်မှတ်ထားသည့် စမ်းသပ်ကိရိယာများဖြင့် စမ်းသပ်အတည်ပြုခြင်း၊
( ခ ) စမ်းသပ်ကိရိယာများကို အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း၊ မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သည့်အခါ အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း၊
( ဂ ) စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အဖိုးအခပေးသွင်းပါက စမ်းသပ်ကိရိယာဖြင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးခြင်း။
၂၃။ စမ်းသပ်ခြင်းလိုင်စင်ရ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ စမ်းသပ်ကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာရရှိထားသော အချက်အလက်များကို ထပ်မံစမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးရန်အတွက် ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြလာပါက သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်ခပေးသွင်းစေပြီး စမ်းသပ်ကိရိယာများဖြင့် စမ်းသပ်၍ ရရှိလာသည့် အချက်အလက်များကို စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြပေးရမည်။
၂၄။ ဝန်ကြီးဌာနသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ မိမိဝန်ကြီးဌာန၏ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူအရာရှိတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ စမ်းသပ်ခြင်းလိုင်စင်ရ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ ရေနံ နှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းကို စမ်းသပ်ရန်နှင့် ယင်းစမ်းသပ်မှုများ၏ရလဒ်ကို သက်သေခံလက်မှတ်ထိုး ပေးရန် စမ်းသပ်ရေးအရာရှိအဖြစ် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းနှိုင်သည်။
(က) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းနမူနာများကို စမ်းသပ်ပြီးနောက် သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံတွင် သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ဖော်ပြသည့်စမ်းသပ်မှု သက်သေခံ လက်မှတ်ထုတ်ပေးရမည်။
( ခ ) သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်က တောင်းဆိုပါက သတ်မှတ်ထားသည့် အခကြေးငွေပေးသွင်းလျှင် သက်သေခံလက်မှတ်၏ မိတ္တူမှန်ကို ထုတ်ပေးရမည်။ယင်းမိတ္တူမှန်ကို တရားရုံးတွင် သက်သေခံအဖြစ်တင်ပြနိုင်သည်။
၂၆။ စမ်းသပ်ရေးအရာရှိ၏ စမ်းသပ်မှုရလဒ်ကို ကျေနပ်မှုမရှိသောပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယင်း၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် ယင်းရလဒ်ကို ရရှိသည့်နေ့ရက်မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း ထပ်မံစမ်းသပ် ပေးရန် ဝန်ကြီးဌာနသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
၂၈။ ပုဒ်မ ၂၇ နှင့်အညီ ထပ်မံစမ်းသပ်ချက်အရ မူလစမ်းသပ်မှုသည် မှားယွင်းကြောင်းပေါ်ပေါက် လျှင် ဝန်ကြီးဌာန၏ စမ်းသပ်ရေးအရာရှိသည် မူလသက်သေခံလက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်၍ စမ်းသပ်မှု သက်သေခံလက်မှတ်အသစ် ထုတ်ပေးရမည်။
၂၉။ ဝန်ကြီးဌာနသည် အောက်ဖော်ပြပါ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့်စည်းကမ်းချက်များကို အမိန့်ကြော်ငြာစာထုန်ပြန် သတ်မှတ်နိုင်သည်-
(က) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်း စမ်းသပ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊
( ခ ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းစမ်းသပ်မှုသက်သေခံလက်မှတ်ပုံစံနှင့် ယင်းအတွက်စည်းကြပ်မည့်အဖိုးအခများကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
( ဂ ) လိုင်စင်ရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၏ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စမ်းသပ်သည့် အရည်အသွေးရလဒ်အပေါ် လိုအပ်ပါက ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် စည်မျဉ်းနှင့်စည်းကမ်း များသတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဃ) ပြန်လည်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် အဖိုးအခများသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်မူလစမ်းသပ်မှုသည်မှားယွင်းပါက ယင်းအဖိုးအခများကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃၀။ မည်သူမျှ ဤဥပဒေအရ လိုင်စင်ရယူရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခု ကို သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်မရရှိဘဲ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။
(က) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စည်းကမ်းချက် တစ်ခုခုပါတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ကို ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရ ၊
( ခ ) ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်း တစ်မျိုးမျိုးပါရှိသည့် ထုတ်ပိုးထည့်သွင်းပစ္စည်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်သည့်ယာဉ်နှင့်ပိုက်လိုင်းများတွင် ဘေးအန္တရာယ် အမှတ်အသားသတိပေးချက်များကို ထင်ရှားအောင် ရေးသားဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ သုံးစွဲခြင်းမပြုရ၊
( ဂ ) ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ ဘေးအန္တရာယ်မရှိသော ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ ဤဥပဒေပါ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများမှတစ်ပါးတင်သွင်းခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း မပြုရ၊
(ဃ) ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများအပေါ် တာဝန်ခံမှုမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိစေရ၊
( င ) စံချိန်စံညွှန်း၊ အရည်အသွေးနှင့်အခြင်အတွယ် ပြည့်မှီမှန်ကန်မှုမရှိသော ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းမပြုရ၊
၃၂။ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူမည်သူမျှ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်း တစ်မျိုးမျိုးကို ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ချက်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းပြုသည့် နေရာတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ဆဲအချိန်တွင်ဖြစ်စေ၊ အခွင့် အာဏာအပ်ထားသော အရာရှိ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းက ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ ထုတ်ပိုးထည့်သွင်းပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ သယ်ယူပို့ဆောင်သည့် စက်အားသုံးယာဉ်၊ စက်ယန္တရား၊ ရေယာဉ်၊ ပိုက်လိုင်းတို့ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းနမူနားရယူလိုကြောင်း တင်ပြလာ ပါကသင့်လျော်သော အကူအညီတောင်းခံခြင်းကို ငြင်းဆန်ခြင်းမပြုရ။
၃၃။ ရေနံရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့် ပေါက်ကွဲမှု သို့မဟုတ် မီးလောင် မှုဖြစ်ပွားလျှင်ဖြစ်စေ၊ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းထားရှိရာနေရာနှင့် ယင်းအနီးအနားတွင် မီးလောင် မှုဖြစ်ပွားတန်ရာရှိလျှင်ဖြစ်စေ အဆိုပါလုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သူမည်သူမျှ အနီးဆုံးသက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်ထံ ချက်ချင်းသတင်းပို့ရန်နှင့် မတော်တဆဖြစ်ရပ်တစ်ခုခုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက် အလက်များကိုပေးရန် ပျက်ကွက်မှုမရှိစေရ။
၃၇။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ပုဒ်မ ၃၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က)နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ)ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်လုပ်ငန်း၊ ဌာနသည် လိုင်စင်ရရှိသူအား အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်-
( က) သတိပေးခြင်း၊
( ခ ) သတ်မှတ်ထား​သောဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊
၃၅။ ပုဒ်မ ၃၄ အရ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဌာနကချမှတ်သည့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို မကျေနပ်သူသည် ယင်းအမိန့်ချမှတ်သည့်နေ့မှရက် ၃၀ အတွင်း လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနသို့ အယူခံဝင်ရောက် နိုင်သည်။ ယင်းဝန်ကြီးဌာနက သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဌာနကချမှတ်သည့် စီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာအမိန့်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းပြုနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်သည့် အပြီးအပြတ်အတည်ဖြစ်သည်။
၃၆။ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနသည် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန် သောနည်းဥပဒေများပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မည်သည့်လိုင်စင်ကိုမဆို ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်း ခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းပြုနိုင်သည်။ ထို့ပြင် မူလကသတ်မှတ်ထားသော လိုင်စင် စည်းကမ်းချက်များကိုလည်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အခန်း( ၈ )
၃၇။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၀ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင် ခြင်းခံရလျှင် တစ်နှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း၅၀ အထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ စီရင်ခြင်းခံရမည့်အပြင် ပြစ်မှုကျူးလွန် ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမည်။
၃၈။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၇ အရ ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရပြီးနောက်၊ ထိုပြစ်မှုကို ထပ်မံကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရလျှင် နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံးကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆုံးကျပ်သိန်း ၁၀၀ အထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ပြစ်ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည့် အပြင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကို ပြည့်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်းခံ ရမည်။
( က ) ပုဒ်မ ၃၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဃ)ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် အနည်းဆုံးကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သိန်း ၅၀ အထိ ငွေဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
( ခ ) ပုဒ်မ ၃၁၊ ပုဒ်မခွဲ (င)ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ခြောက်လထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံးကျပ် ငါးသိန်းမှ အများဆုံးကျပ်သိန်း ၅၀အထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၄၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၂ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင် ခြင်းခံရလျှင် အနည်းဆုံးကျပ် ငါးသိန်း မှ အများဆုံးကျပ်သိန်း ၅၀ အထိ ငွေဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံရ မည်။
၄၁။ ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သူမည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၃ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ခြောက်လထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံးကျပ် ငါးသိန်း မှ အများဆုံးကျပ်သိန်း ၅၀အထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။
၄၂။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အနည်းဆုံးရှိရ မည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်းနှင့်အကွာအဝေးကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။ မည်သူမျှ ယင်းသတ်မှတ်ပေး ထားသည့်နယ်နိမိတ်အတွင်း မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် ဆောင်ရွက်မှုတစ်စုံတစ်ရာကို မပြုလုပ်ရ။
၄၃။ တရားရုံးသည် ပြည်သူဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းရရှိသည့် သက်သေခံပစ္စည်းများအား ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများသို့ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။
၄၄။ ဤဥပဒေမပြဌာန်းမီက တည်ထောင်ထားသော ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် သူသည် ဤဥပဒေနှင့်ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သောနည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲ၍ ဤဥပဒေ အရ လိုင်စင် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်​ပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်။ ယင်းဝန်ကြီးဌာန သည် တင်ပြလာသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို စိစစ်သုံးသပ်၍ ကျေနပ်မှုရှိပါက အတည်ပြုရမည်။ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူသည် ဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ပေးသည့် အချိန် ကာလအတွင်း မိမိလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၄၅။ ဝန်ကြီးဌာနသည် မိမိလက်အောက်ရှိ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ် သင့်လျော် သည့် အချိန်တွင် တည်ထောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၄၆။ ဤဥပဒေအရ အရေးယူသည့် ပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် မှတ်ယူ ရမည်။
၄၇။ The Petroleum Act.(INDIA Act XXX,1934)အရ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ဤဥပဒေနှင့်မဆန့်ကျင်သမျှ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၄၈။ The Petroleum Act.(INDIA Act XXX,1934)အရ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော လိုင်စင် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုမိန့်များကို ဤဥပဒေအရထုတ်ပေးသော လိုင်စင် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုမိန့်များ အဖြစ် မှတ်ယူ၍ ယင်းတို့တွင်ပါရှိသော သက်တမ်းနှင့်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ဆက်လက်တည်ရှိစေ ရမည်။
၄၉။ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိ၏လုပ်ငန်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေရန် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၅၀။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ရမည်။ နိုင်ငံဝန်ထမ်းမဟုတ်သော ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအတွက် သင့်လျော်သည့် ချီးမြှင့်ငွေနှင့် စရိတ်တို့ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၅၂။ ဤဥပဒေဆိုင်ရာ အခွန်အခများအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် ဝန်ကြီးဌာန၊ အခွန်အခ ကောက်ခံသည့် ဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့်တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရတို့ကြား မည်သို့ကောက်ခံ ခွဲဝေသုံးစွဲရမည်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် ဝန်ကြီး ဌာနနှင့် အခွန်အခကောက်ခံသည့် ဝန်ကြီးဌာနတို့က အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ရမည်။
၅၃။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသော၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်ငြင်ပယ်ခြင်းခံရသော
သို့မဟုတ် ပြင်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းမပြုသော ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို သိမ်းဆည်းပြီး ထုခွဲခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းပြုနိုင်သည်။
၅၄။ ဤဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-
(က) ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
( ခ ) ဝန်ကြီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့်ကော်မတီသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
၅၅။ The Petroleum Act.(INDIA Act XXX,1934) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။